Vaovao - momba ny ICF (template mivaingana voaravaka)
ICF, Forma Concrete Insulated, any Shina koa dia antsoin'ny olona hoe modely EPS voaroaka na sakana EPS. Vita amin'ny milina famolavolana endrika EPS sy bobongolo ICF izy io. Ity karazana modely EPS ity dia tena mandaitra amin'ny insulate hafanana sy ny ins insulateur. Voasedra fa ny fitehirizana angovo ireo tranobe vita amin'ny bloc ICF dia mety hahatratra 65%. Ny sakana EPS ICF dia tsy manome fomba mahomby amin'ny fananganana insulement rindrina ivelany any amin'ny faritra mangatsiaka, fa koa mamaha ny olan'ny fananganana toy ny fametahana ny rindrin'ny rindrina ivelany, ary ny vanim-potoana fananganana lava. Ny fananganana modely ICF dia tsotra sy haingana, ny fifandraisana amin'ny lela-sy-fanovozana eo amin'ny modules dia mahatonga ny fifandraisana ho tery tokoa. Ny lalan-drovetail amin'ny modely ICF dia mamela ny lalotra plastera hifikitra mafy amin'ireo modely EPS.
Ny modely EPS ICF dia vokatra malaza be eo amin'ny sehatry ny fanamboaranay.
Raha ampitahaina amin'ny biriky tanimanga nentim-paharazana, ny tombony dia:
1.Mitahiry vola: Mihevitra ny olona fa lafo kokoa ny modely fitahirizana angovo EPS noho ny biriky tanimanga mahazatra. Raha ny marina dia maivana ny lanjan'ilay rindrina modely EPS, izay afaka mampihena ny vidiny fototra, manitatra ny faritra ampiasana, mamonjy herin'olombelona, ​​mamonjy fitaovana, ary ny vidiny ankapobeny dia tsara kokoa noho ny fampiasana biriky tanimanga.
2.Ny fotoana fitsitsiana: haingana ny fanamboarana ny trano. 6 ny olona afaka mamita ny tena fanamboarana ny trano 150 metatra toradroa (ao anatin'izany ny beton-tafo) ao anatin'ny 7 andro, ary avy eo manatanteraka ny haingo. Ny fe-potoana fananganana iray manontolo dia tsy mihoatra ny 3 volana.
3.Ny fitsinjaram-pahefana: firafitra tsotra sy hamafin'ny asa ambany. Na ireo mpikarakara tokantrano tsotra aza dia afaka manangana trano mora foana toy ny fananganana barazy eo ambany fitarihan'ny mpiasa matihanina.
4.Energy famonjena sy fampihenana ny emission: tsara insulated effet effets, mafana amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra. Any Chine Avaratra, noho ny hafanana ambany amin'ny ririnina dia ampiharina isaky ny trano ny rafitra fanamainana. Ny modely namboarina tao amin'ny ICF dia nanampy tamin'ny fampihenana ny telo ampahefatry ny fanafanana arintany any ambanivohitra, hampihenana ny fanjifana arintany sy ny setroka ary ny famoahana vovoka.
5.Fiorenana mafy sy fanoherana ny horohoron-tany mahery. Rehefa avy nampiasa ny sakana EPS ICF amin'ny fanamboarana, ny firafitry ny biriky mahazatra dia novaina ho lasa rafitra mivaingana tsy misy vidiny mihombo, ary nampitomboina in-7 ny tanjaky ny seismika. Raha ny fitsapana ny foibem-panadinana horohoron-tany, raha mihoatra ny 8 degre ny halehibeny, dia tsy mampidi-doza ny fiovan'ny endrika trano, ary raha ambany noho ny 8 degre ny tanjany dia tsy simba ny vatan'ny trano.
Manoloana ireo voalaza etsy ambony ireo, ireo tranobe modely ICF namboarina dia mahatonga anao tsy hanana ahiahy. Ny maodely fananganana EPS ICF dia manaparitaka ny maodely fananganana nentim-paharazana ary mahatratra ny tanjon'ny trano maitso sy ny fiainana maitso, hoy ny famoahana ny karbaona ambany, ny fitsitsiana angovo ary ny fikajiana mafana, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny faharetany ary ny fahombiazan'ny seismika avo lenta. Safidy mety rehefa manao tranobe vaovao.